Espaina: Seranam-piaramanidina Tsy Misy Voromby? · Global Voices teny Malagasy
Espaina: Seranam-piaramanidina Tsy Misy Voromby?	Voadika ny 25 Janoary 2013 15:00 GMT
Zarao: Tsy dia fandre mahazatra amin'ny vaovao misongadina ny resaka seranam-piaramanidina, raha tsy resahina ny loza an-habakabaka na misy ny fitokonana ataon'ny mpiasa ka mivadika ho afo fandiovana ho an'ny mpandeha izany. Na dia izany aza, manana seranam-piaramanidina iray malaza i Espaina, izay nivoaka tamin'ny gazety sy tamin'ireo lohatenim-baovao antserasera hatramin'ny nisokafany: Seranam-piaramanidina Castellón [es].
Natsangana toy ireo foto-drafitrasam-panjakana maro hafa tsy dia misy fotony ity seranam-piaramanidina ity, nandritra ny taompolo lasa nanombohan'ny krizy ara-toekarena, fanokanana makotrokotroka [es] no nataon'ny filoham-paritry Castellón, Carlos Fabra izany tamin'ny volana Martsa 2011, herinandro mialoha ny fifidianana ben'ny tanàna, na dia mbola tsy nisy aza ny tetiandro fisidinan'ny zotram-piaramanidina tamin'izany. Raha ny marina dia mbola tsy nahazo fahazoan-dalana momba ny fifamoivozana an-habakabaka izy ireo. Olona 1500 no tonga nanatrika ny lanonana, anisan'izany i Francisco Camps, Filohan'ny Generalitat Valenciana tamin'izany fotoana, izay nametra-pialàna taorian'ny faimpangana azy ho nanao kolikoly [es]. Fotoana mahatsikaiky no nanamarika ny lanonana fanokanana izay nalaina tao anatin'ity lahatsary mahatsikaiky notontosain'ny El Intermedio [es], tamin'ny fandaharana La Sexta.
Amin'ny lisitr'ireo hadalàna momba ity seranam-piaramanidina ity ny fahadisoam-panamboarana [es] izay nahatonga ny lalam-pitodian'ny voromby ho tsy azo ampiasaina, ka mbola mila fanamboarana indray alohan'ny hampiasana azy, fanampin'izany ihany koa ny fanamboarana ilay sary sokitra goavana [es] eo amin'ny fidirana amin'ny fiholanan-dalana — natsangana ho fahatsiarovan an'i Fabra ny sary sokitra, araka ny filazan'ny mpanamboatra azy — izay mitotaly 300.000 euro ary tsy nahazaka ny hamandon'ny faritra.
Seranam-piaramanidina Castellón. Tao amin'ny Bilaogy #La Campana De La Vela.
Na dia mbola tsy miasa aza ny seranam-piaramanidina, mandany vola be isan-taona ny fikojakojana ny foto-drafitrasan'ity seranam-piaramanidina ity , araka ny filazan’ny lahatsoratra tao amin'ny elplural.com [es]:
Harafesenina eo amin'ny sokitra mandravaka ny fidirana ao amin'ny seranam-piaramanidina. Sary avy amin'ny bilaogy Hits Book.
Tamin'ny taona 2011, nahazo vola mitentina 88.104 euro i Juan García Salas, Tale Jeneralin'ny Aerocas [orinasam-panjakana misahana ny fitantanana ny seranam-piaramanidina], ary vola mahery lavitra noho izany no noraisiny tamin'ny taona 2012 izay mitentina 84.200 (…)
Saingy tsy izay ihany. Niakatra 6.484.935 euro ny fandaniana amin'ny saram-pitrandrahana tamin'ny taona 2011. Tamin'ity vola ity, 5.092.596.22 euro no nolaniana tamin'ny dokam-barotra sy ny serasera; izany hoe, maherin'ny 78%. Ny ambiny 918.663 euro kosa dia nalefa tany amin'ny sampan-draharaha matihanina tsy miankina: ka 368.865.49 euro no karaman'ireo mpiasa fito tamin'izany; 223.074 kosa nolaniana tamin'ireo asa hafa notontosain'ireo orinasa hafa; 129.430 tamin'ny sampan'asa hafa; 23.412 ho an'ny hofan-tany sy ny hetra ary 23006 ho an'ny fandaniana amin'ny banky. Carlos Fabra [es], no anisan'ny tompon-kevitra tamin'ity seranam-piaramanidina ity, politisianina avy ao amin'ny antokom-bahoaka izy, ary anaty fianakaviana mpandova ara-politika ao Castella. Izy no lehiben'ny faritra nanomboka ny 1995 hatramin'ny 2011, toerana izay nialàny taorian'ny fiampangana azy ho nanao kolikoly sy nanararao-pahefana tamin'ny taona 2010. Rain'i Andrea Fabra ihany koa izy, solombavambahoaka avy ao amin'ny antoko PP izay nanjary nalaza ratsy volana vitsy lasa izay noho ny fitabatabany hoe “Tsy raharahako ireo!” tao amin'ny Kongresy raha nanambarana ny fampihenana tetibola ho an'ny fanampiana ireo tsy an'asa ny filoha Rajoy.
Andro vitsy lasa izay, nanambara i Fabra tenany, izay mitantana ny Aerocas amin'izao fotoana fa misy vondron'orinasa iray nanome tolotra fa hividy ny seranam-piaramanidina Castellón [es] 200 tapitrisa euro. Na dia tsy ahazoana tombony [es] araka ny dradradradrain'ny mpitantana ny Aerocas aza ny tolotra, dia mijanona ho vaovao tsara izany, noho ny halafosan'ny fikojakojana ny fotodrafitrasa. Na dia izany aza, nahatalanjona ny maro ny vaovao, satria fantatra fa tsy ilaina mihitsy ilay seranam-piaramanidina, ka niteraka fanontaniana momba ny antony mahatonga izay olona te-hividy izany.
Arak'izany, namorona tenifahatra #NuevosUsosAeropuertoDeCastellón [es] (#FampiasanVaovaoNySerananaCastellón) ny tao amin'ny Twitter, izay nanjary lohahevitra nalaza tamin'ny 10 Janoary, naneho hevi-baovao momba izany ireo mpiserasera.
Eiryah Udhen [es] sy Eva [es] nihevitra fa ho atokana ho an'ny fanatanjahan-tena ilay izy:
@Eiryah: Kianja mety tsara ho an'ny Fiadiana ny amboaran'ny Tsipy Kanetibe
‏@evitalunera: Manomboka 7 Jolay, fetiben'ny San Fermín
Marina Segovia [es] sy David Antonio Tomico [es] miròna kokoa amin'ny zavakanto:
@marinuxy_94: sekoly ho an'ny mpanao sary sokitra manana endrika seranam-piaramanidina
@DTomico: Tsangambato ho fahatsiarovana ny fitokana-monina
jose melchor valero [es] sy Magnes [es] kosa nanolo-kevitra ny hanaovana azy ho toerana hialana voly amin'ny alina:
@josemelchor1: Toerana ofisialin'ny faritra hikarakarana botellón. [Fihaonam-ben'ny tanora miaraka amin'ny toaka.]
@ValNyx: Fifohana Marijuana. Farafaharatsiny mba misy olona iray misavoamboana AAAAHAHHAHAHAH.
Mars, fitohanana an-habakabaka noho ny seranana Castellón. Sary: Cuánta Razón.
Javier Etxarri [es], Tanya G [es] sy ElNinjaDeLasGalletas [es] nisafidy ny biby:
@jetxarri: Iray isaky ny faritra! RT”@quiquepeinado: Zoorupto, toerana hiompiana olona tratra nanao kolikoly “. ‏@TanyGomez: Caracolódromo
@Chinobi_Ninja: ary rehefa tsy misy voromby, maninona raha asiana Angry Birds [lalao vidaka] amin'ny tena habeny? Hokendrentsika ry zareo satria kisoa ry zareo…
Gorka Zumalabe [es] sy ManuMillán [es] manao tarehy ratsy:
@tormentad: Tsy mampihetsika ny asa andavanandron'ny seranam-piaramanidina? Adala ve ianareo e? XD XD
DiQuijorna [es] no manana hevitra revolisionera indrindra amin'ny rehetra:
‏@JordiDiaz71: Azontsika atao ihany koa ny manao azy ho seranam-piaramanidina, satria io no zavatra farany indrindra tsy noeritreretina hampiasana azy
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraLourdes Sada
Tantaran'ny Eoropa Andrefana farany 14 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaNy “Alice Any An-tanin'ny Fahagagana” Araka Ny isainan'ilay Libaney-Frantsay Mpitsoka Trompetra Azy Rehefa Atao Gadona Hip-Hop Opera
22 ora izayGresyMiray Hina Isan'Andro Ny Olona Mba Hanampy Ireo Mpitsoa-ponenana Ao Gresy
Vakio amin'ny teny Français, English, Ελληνικά, বাংলা, Català, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Español
Mediam-bahoakaPolitikaToekarena sy Fandraharahàna